Raad Raac News Online – Gerard Pique: Qaladkii Garsooraha Iyo Xaalada Garoonka Midkoodna Marmarsiiyo Kama Dhigan Karno.
Gerard Pique: Qaladkii Garsooraha Iyo Xaalada Garoonka Midkoodna Marmarsiiyo Kama Dhigan Karno.
Daafaca kooxda Barcelona Gerard Pique ayaa aqbalay guuldaradii xalay ka soo gaartay AC Milan, isagoo sheegay in kooxdiisa aysan heysan wax marmarsiiyo ah oo ku aadan guuldarada lugta hore ee wareega 16ka ee Champions League.
Rossoneri ayaa talaabo muhim ah u qaaday wareega 8da ka dib markii ay 2-0 kaga talaabsatay kooxda Bluagrana oo marti ku aheyd San Siro, Gerard Pique ayaana qirtay in natiijo xun ay u aheyd kooxdiisa islamarkaana aan qabin wax marmar siiyo ah.
“Waa natiijo xun. Si fiican uma aanan ciyaarin. Gool ayay ku hormareen ka dib wax walba wax ay noqdeen wax aad u adag. Laakiin kooxdaan waa Barcelona waa inaan ka soo kabsanaa” ayuu yiri Pique ciyaarta ka dib.
“Waxaan u baahanahay inaan tani wax ka barano islamarkaana hore uga sii socono. Waan ogeyn waxa aan wajaheyno; waxa ay ka hadlayeen inay yihiin kooxda liidata laakiin mar walba waa ay adkaayeen. Waa ognahay ilaa iyo inta ay fiican yihiin.”
Iyadoo muran uu ku jiray goolka hore ee Milan oo kubad ay gacanta kaga dhacday Zapata ka hor inta uusan Boateng goolka dhalin ayaa wax laga weydiiyay Pique waxaana uu ku jawaabay:
“Garsoorayaasha mararka qaar qaladaad ayay sameeyaan. Taas iyo xaalada garoonka midkoodna marmarsiiyo kama dhigan karno.”
Barcelona ayaa xilli ciyaareedkii hore ku andacootay in xaalada garoonka San Siro aysan aheyn mid hagaagsan islamarkaana kubada baaska aysan si fiican ugu shaqeyn karin.